Toerana tsara indrindra ho an'ny maodely famerenana maimaim-poana sy Premium | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | dia midika hoe, Templates, maro
Anatin'ity taona 2020 ity isika ary hanasongadinana zavatra tsara: manana isika eo am-pelatanantsika loharanom-bola an-jatony ho an'ny modely resume izay ahafahantsika mampiseho ny mombamomba antsika amin'ny fomba tsara indrindra.
Ary na dia tsy ao anatin'ny fotoana fiasana tsara indrindra ho an'ny asa sasany aza izahay, ho an'ny maro hafa, toy ny nomerika, mahafantatra ny fomba hikarohanay azontsika atao Mitondrà modely tohiny ho anay ahafahantsika mamela tsara an-tsoratra sy aseho antsika amin'izay toerana tsara indrindra iasantsika sy inona ny mombamomba antsika. Hanao izany amin'ny andian-loharanom-pahalalana isan-karazany isika.
1 Modely ho an'ny fandaharam-pianarana 24
3 Modely premium an'ny Microsoft
4 Modely fanombohana Freepik
5 CM an-dakilasy
11 Asa voalohany
Modely ho an'ny fandaharam-pianarana 24
Este tranokala mamela antsika hisintona maimaim-poana ary tsy mila mandalo pejy fisoratana anarana, modely isan-karazany tsara kalitao avo lenta amin'ny foto-kevitr'izy ireo sy ny endriny. Avy amin'ny pejin'ny modely tsirairay dia azontsika atao ny misintona ny maodely amin'ny Word ary avy eo manitsy sy manamboatra azy araka izay itiavantsika azy amin'ny programa fanovana Microsoft.
Raha tsy manana an'ity programa ity amin'ny Windows ianao dia amporisihanay izany mampiasa ny fampiharana sasany ho an'ny Android sy iOS ianao ary amboary izany amin'ny antsipiriany avy amin'ny takelaka na finday. Miaraka amin'ny faharetana kely dia azonao atao ny manomana ny piraofilinao matihanina miaraka amina modely kalitao premium, misy amin'ny endriny rehetra.
Modely CV - Malagasy
Miaraka amin'i Zety Eny, miatrika «mpanangana resume an-tserasera» izahay ary amin'izany, noho ny zava-misy amin'ny teny Espaniôla, dia ho azonay atao ny mamaritra, tsikelikely, ny tsirairay amin'ireo sehatra manan-danja indrindra mamaritra ny mombamomba anay. Ity tranonkala ity dia tanterahina tsara ka amin'ny alàlan'ny interface-ny dia tsy diso anjara dingana lehibe iray izahay.
Azontsika atao ny misafidy alohan'ny hanombohana amin'ny tonian-dahatsoratra ny karazana fandaharam-pampianarana tianay hampiasaina mba hampazava tsara ny endriny. Ny mombamomba ny famoronana dia tsy mitovy amin'ny endrika administratif. Ao amin'ny tontonana lafiny misy antsika ny fizarana rehetra mandrafitra ny modely an-tserasera mba hahafahantsika maka azy amin'ny farany. Na dia miditra eto aza ny ampahan'ny fisoratana anarana ho an'ny mpampiasa mba hahafahantsika mamela ny mailaka sy ny angon-drakitra. Raha tsy tianao ny mandeha amin'ny Word amin'ny fampiharana finday na mampanjifa ny maodely dia mandeha tsara ity mpamoaka an-tserasera ity.
Modely premium an'ny Microsoft
Izahay dia tsy te-hijery an-tsakany sy an-davany ny kalitaon'ny maodelin'i resume Microsoft amin'ny alàlan'ny Teny. Raha sendra manana serivisy Microsoft 365 isika dia manana Word ary midika izany fa manana karazany marobe amin'ity andiana modely ity halefa maimaimpoana isika; Lojika raha miatrika serivisy famandrihana isan-taona izay tsy mihoatra ny 100 € isika, mba hahafahantsika mampiasa ny fitehirizany ao amin'ny rahona sy ny fiasan'ny birao mba hanana vahaolana miavaka.
avy amin'ny io Teny io ihany no azontsika idirana amin'ireo modely ireo hampidina ny fandaharam-pianarana ary hanova azy amin'ny programa fanovana lahatsoratrao. Safidy fandoavam-bola iray manontolo izay mety ho mora ampiasaina rehefa maniry karazana haavo hafa ianao; na anontanio fotsiny ny mpiara-miasa aminao amin'ny WhatsApp raha manana fidirana amin'ity programa ity izy ireo hahafahan'izy ireo mamela anao hampiasa azy io.
Biraon'ny modely - Web
Modely fanombohana Freepik
Satria tsy miverina miaraka amin'i Freepik isika, toy ny inona ihany nanao iray andro lasa izay izahay niaraka tamin'ny modely Powerpoint, ary eto isika dia afaka miditra a tsara be dia be ny maodely maimaimpoana sy kalitao manova tsotra izao ny lahatsoratra ary ao anatin'ny minitra vitsy dia miomàna mombamomba matihanina tsara.
Azontsika atao ny manazava izany fa Freepik dia mbola iray amin'ireo tranonkala loharanon-karena maimaim-poana, ary koa premium, misy kalitao tsara kokoa amin'ny karazany rehetra. Aza adino ny atiny satria manolotra ny fomba rehetra misy faharetana kely ary mahay mikaroka. Izahay dia efa nametraka ny rohy mankany amin'ireo modely ho an'ny vita vita amin'ny fandaharam-pianarana.
Modely fanombohana Freepik - Malagasy
Un tranokala fianarana ary ho toy ny sekoly ho an'ny marketing nomerika ary ao amin'ny iray amin'ireo lahatsorany no ahitantsika ny lisitry ny maodely resume avo lenta maimaimpoana maimaimpoana. Azonay apetaka eto ireo rohy, saingy mamporisika anao izahay hahafantatra ity habaka ity ary, indraindray, fantaro ny karazana karazana fandaharam-pianarana malaza indrindra amin'ny fanazavana tsara.
Al faran'ny lahatsoratra ao amin'ny Aula CM dia ho hitanao ireo rohy mankany amin'ny Google Drive avy amin'ny toerana ahafahanao misintona azy ireo ary manana amin'ny alàlan'ny findainao na ny solosainao modely tsara ho an'izay mombamomba anao noforoninao, na amin'ny fitadiavana asa voalohany na amin'ny fikarohana mavitrika hanatsarana ny ankehitriny aorian'ny fandalinana fanadihadiana natao. .
Classroom CM ohatra modely Modely maodely - Google Drive
Nandalo izahay tranokala mpanorina resume an-tserasera izay amin'ny teny anglisy, fa napetrakay ho solon'ny ambiny. Misafidy famolavolana modely fotsiny izahay ary manomboka manitsy ny saha tsirairay amin'ny alàlan'ny interface ho an'ity tranonkala an-tserasera ity.
Avy amin'ny zavatra niainana tsotraRaha mbola miteny anglisy ianao dia afaka misafidy ny loko hanamboarana ny modely ary manangana azy avy eo miaraka amin'ireo saha rehetra izay anehoanao ny zavatra niainanao. Tranonkala mahaliana noho ny fomba nanamboarana azy, na dia tsy mijanona ny fangatahana ny angon-drakitrao amin'ny alàlan'ny pejy fisoratana anarana. Eny, tsy mangataka euro aminao ho setrin'izany, noho izany dia ampirisihinay ianao ho mpanamboatra modely an-tserasera ho an'ny mombamomba anao.
CV template - Web
iray hafa tranokala amin'ny teny anglisy izay ahafahantsika manangana ny fandaharam-pianarantsika amin'ny alàlan'ny dingana maromaro izay atoro antsika. Eny, mila misoratra anarana ianao mba hahafahanao miroso ary manoratra ny fandaharam-pianarantsika avy amin'ny zavatra niainanao.
Nirehareha izy fa nety ny fandaharam-pianarana miditra amin'ny sehatry ny matihanina amin'ny orinasa lehibe. Raha mijery ny kalitaon'izy ireo isika, ny marina dia tsy ratsy mihitsy izy ireo ary modely madio amin'ny famolavolana manasongadina minimalism, na dia tsy tsy ampy aza ny loko. Mihoatra ny 20 ny modely averinao izay tena tsara ary mamela anao hiditra amin'ny tontolon'ny matihanina amin'ny fomba tsotra sy mahomby.
La magazay malaza amin'ny atiny rehetra noforonin'ny mpamorona izay miakatra amin'ny mombamomba anao hivarotra, dia manome modely an-jatony na modely resume ihany koa. Nametraka an'ity rohy ity izahay satria, na dia tsy maimaim-poana aza ny maodely, dia manana kalitao ampy izy ireo mba hanavahana ny tenantsika amin'ireo ambiny.
Fantatrao sahady fa amin'ny fikatsahana asa dia tokony ho hainao ny manavaka ny tenanao amin'ny sisa, ary manoratra fandaharam-pianarana iray izay tsy mitovy amin'ny famolavolana, manadio ny faritra na ny firafiny nefa tsy mavesatra, dia mety ho lakilen'ny fahitana mba hahitantsika ny hafa. Ireo modely ananantsika ao amin'i Etsy, ny mpivarotra tsara indrindra, Manodidina ny 7 euro izy ireo, ka raha te-hanavaka ny tenanao ianaoIzy io dia mety ho safidy tsara amin'ny ambiny; indrindra raha te handany fotoana bebe kokoa ianao amin'ny famenoana ny fandaharam-pianarana fa tsy ny fananganana famolavolana sy bebe kokoa.
Modely resume Etsy - Web
Ao anaty a tranokala an'i Envato, tsenan'ny lohahevitra, modely ary plugins amin'ny zavatra rehetra Karazana CMS tena malaza ary manana rohy mankany amin'ny fisintomana modely 20 averina izay tsy tokony hafoinay. Azonao omena maimaim-poana izy ireo ary manazava ny tsirairay amin'izy ireo ianao mba hahafahanao misintona azy ireo tsy misy fanoloran-tena.
Cada ny iray amin'ireo môdely 20 dia manana kalitao avo lenta, noho izany dia tsy maintsy misafidy karazana karazana, loko sy endrika tiana homena antsika bebe kokoa ny mombamomba antsika isika. Sehatra malaza sy malaza ahafahanao miditra amin'ny modely hanavahana ny tenanao amin'ny sisa.
Modely Tutsplus - Web
La Infojobs sehatra fikarohana asa mamela antsika hiditra modely 15 ny vita vita amin'ny fandaharam-pianarana mba hidirana amin'ny tsenan'ny asa amin'ny fomba tsara indrindra. Ny zava-misy fa natokana hampiasaina any Espana ity tranonkala ity dia efa mamaritra tsara ny kalitaon'ny modely nomeny sy ny fomba hanompoany anay tonga lafatra amin'ny iraka ataontsika.
ny Misy ny karazany rehetra ary natao ho an'ny tsena Espaniola izy ireo asa, noho izany dia saika nataonay tsara indrindra tamin'ity andian-tranonkala ity izy ireo hisintona modely fanombohana kalitao. Fotoana izao hitadiavana asa amin'ny alàlan'ny vavahadinao.
Infojobs manohy modely - Web
Este Ny tranokala espaniola voalohany momba ny asa dia manome antsika fidirana amin'ny modely hafa na ny modely tsy azo tsinontsinoavina ary manome sosokevitra toa ilay teo aloha izahay avy amin'ny Infojobs. Tsotra, nefa mandaitra, izy ireo dia mikendry ny tsenan'ny asa eto amintsika, koa aza hadinoina ny iray amin'izy ireo mba hamboarina manokana ny fampidinana ny rakitra Word araka ny itiavanao azy ary mazava fa te-hitady asa ianao.
Asa voalohany - Web
Vao avy nahavita ity lisitry ny tranokala ity izahay ho an'ny modely resume miaraka amin'i Canva, iray amin'ireo manam-pahaizana hafa momba ny fanomezana atiny avo lenta avy amin'ny Internet ary manana mpanamboatra modely ihany koa izy ireo; izay mbola azonay ampiasaina amin'ny karazana asa hafa toa anao nampianatra tamin'ny lahatsoratra hafa izahay eto amin'ny Creativos Online.
Canva resume modely - Web
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Avereno jerena ny template mba hisintomana sy hanehoana ny tenanao tsy mbola nisy toy izany teo amin'ny sehatra matihanina